နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးပိုင်းအတွက် စိတ်ချရသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး လူကြိုက်များလျက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့..
Q10 Body Bath 800ml
BOYA Q10 Body Bath 800ml Excellent long-term antioxidant to prevent damage caused by reactive oxygen species to the skin. Substantially improved the density and degree of compactness of the skin..
Q10 Shampoo (500ml)
Nourishes the hair growth accelerator hair to grow faster and nourishes the hair shaft to protect hair + Nano Q10. Q10 and vitamins to nourish the hair follicle and the second in four scalp hair silky..
Q10 Treatment 500g
Boya မှ ထုတ်လုပ်သော Q10 Treatment Essence 680g သည် ဂျပန်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆံပင်ကို အထူးပင် အားဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်များပြည့်ဝစွာပါဝင်သောကြောင့် ဆံပင်များကို အထူးပင်ပျော့ပျောင်းစေမှာ..
Seaweed & Arbutin Body Booster 800ml
Seaweed Extract from deep under the sea is the main ingredient used to create this Body Booster. It does everything it can to efficiently reduce red and dark spots, as well as scars while balancing th..